14 Kacha Ebere Azụmaahịa Ego Sọọsọ Iji Mwube Azụmaahịa gị na Dubai. Are na-eche ihe kachasị mma ụzọ iji malite ịmalite obere azụmahịa na Dubai? Ikekwe ị bụ otu n'ime ọtụtụ mmadụ nwere nnukwu mmasị ịmalite azụmahịa nkeonwe na Dubai mana ị bụghị ụdị ụdị azụmahịa ịtọlite. Ma ọ bụ ịchọrọ ịchọ ịmata ma ghọta ihe achọrọ ka ịmalite nke gị azụmahịa na United Arab Emirates (UAE).
Ọ bụrụ otu a, ị biala ebe ziri ezi. Ọ bụrụ na ị na-eche itinye ego gị na azụmahịa na UAE, ị ga - ahụ usoro ịtọlite ​​azụmaahịa gị n'ụzọ kwụ ọtọ, maka ozi dị n'isiokwu a. Will ga-enwekwa nghọta nke ahịa kacha mma na UAE itinye ego na itinye ego, ka ị ghara imefu oge gị.
14 Best Business Business Ideas
1. Owuwu na iwu
O yiri ka ụbọchị niile A na-arụ ụlọ ọhụụ ma ọ bụ ihe owuwu na Dubai nke mepere emepe ọtụtụ ohere ma a bịa n’ihe banyere ndị injinia yana ndị ọkachamara ndị ọzọ na ụlọ ọrụ iwu ihe owuwu ahụ. Uto a na-apụta ìhè mgbe ị hụrụ ihe na-eme na-eme ihe https://www.bayut.com. Nke a pụtara na ndị na - achụ ego nwere nnukwu ohere mgbe ịtọlite ​​azụmahịa nke metụtara nrụpụta ma ọ bụ ire akụrụngwa akụrụngwa eji arụ ọrụ.
2. Mmanụ na gas
A bịa na ụlọ ọrụ ndị na-egwu mmanụ na Gas, nke a abụrụla ihe bụ isi nke akụ na ụba mba ahụ ruo ọtụtụ afọ. Ọzọkwa, ọnụọgụ akụ na ụba nke UAE nwere ugbu a nwere ike ịdabere na mpaghara a. Ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ mmanụ na gas dị n'agbanyeghị nha ọ dị, anọgidewo na-enye ndị ọhụụ itinye ego ohere. Ndị ọchụnta ego bụ nwere mmasị na ụlọ ọrụ mmanụ na gas nwere ike ịmalite site na ọkọ, ma ọ bụ ha nwere ike na-emekọrịta ọnụ ọgụgụ nke azụmaahịa dịlarị ebe a.
N'ihi na ọnụnọ nke azụmaahịa dị iche iche buru ibu na Dubai, enwere nnukwu choro maka ndi okacha amara dika ndi na-ako ego, ndi na enyocha akwukwo na ndi na edebe akwukwo, yana ndi n’enye oru dika nhazi ego kaadị akwụmụgwọ. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ntọala siri ike na ọrụ ego ego ọ bụla eburu ụzọ, enwere ohere dị mma na ị nwere ike ịmalite azụmahịa bara uru nke na-enye ụlọ ọrụ ndị ọzọ na Dubai ọrụ ego.
4. Nri na ihe ọṅụṅụ
A bịa na ụlọ ọrụ nri na ihe ọverageụ beụ, ụlọ ọrụ azụmaahịa ga-aga nke ọma ebe niile na n'ọtụtụ ọnọdụ. UAE bụ sọpụrụ n'iwu a. Agụụ ihe oriri na ihe ọ beụ beụ dị na mba a n'ihi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ esenidụt na njem na-aba ụba na-enye ọtụtụ ohere maka azụmahịa. Yabụ na na atụmatụ azụmaahịa dị mfe a gbadoro anya na ire ere nri na nri ngwa ngwa. ị nwere ike inwe ụlọ ọrụ na-aga nke ọma.
5. Nlekọta ahụike
Dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ mepere emepe. ndi Dubai maara banyere ahụike ha ma gosipụta nnukwu ego na nchegbu mgbe a bịara ya. Ka obodo ahụ na-aga n’ihu n’iru, yabụ ihe a chọrọ n’aka ndị na-ahụ maka ọrụ ọkachamara yana akụrụngwa nke ụlọ ọrụ ahụike. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ahụike na-eche ịmalite azụmahịa gị na ngalaba a, Dubai nwere ike igosipụta ezigbo ebe ịmalite.
Ọ bụ ezie na enwere Nleba anya na nchekwa nchekwa na Dubai e jiri ya tụnyere ọtụtụ mba ndị ọzọ, azụmaahịa ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ buru ibu ma ọ dị obere (ma a bịa na akụ ha) anaghị ewere ohere ọ bụla. Nke a emeela ka ndị ọrụ nchekwa, ndị ọrụ na akụrụngwa na-eto eto. Ọ bụrụgodị na ị nweghị ike ịmalite azụmahịa na ọrụ nchekwa nkeonwe, ị ka ga - eme ezigbo ego na mpaghara a. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnye ngwaọrụ nchekwa, dị ka igwe mkpu mkpu na igwefoto onyunyo, n'etiti ndị ọzọ.
N'ihi na ngwa ngwa uto na mmepe na Dubai, ọtụtụ ihe dị ka owuwu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe emebiwo gburugburu ebe obibi. N'otu oge ndị mmadụ na-amatakwu ma ọ bụrụ na abaghị uru dị mkpa nke ichedo gburugburu. N'ihi ya, enweela ọtụtụ ohere ọhụụ na Dubai maka ndị na - akwado ndụ ndụ na azụmaahịa na - enye ọrụ dị iche iche maka ihe ọkụkụ dị ka ihe mkpofu ahịhịa na nchebe gburugburu.
8. Njem nleta
Dị ka anyị niile maara, Dubai abụrụla otu n'ime ebe ndị mmadụ kacha ezumike n'ụwa, dị ka a hụrụ na ọnụ ọgụgụ ụlọ nkwari akụ ise na-arụ ọrụ ugbu a na UAE. Dubai na-akwado ọtụtụ nde ndị bịara ọhụrụ kwa afọ. Nke a n'aka kere ọtụtụ ohere maka ndị mmadụ iji bido ahịa azụmaahịa nkeonwe nke ahụ jikọtara ndị ọbịa na ndị njem ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
Mgbe ọ bịara aka ike na UAE, ebe ha nwere ndi egwuregwu zuru oke, a ka nwere ọtụtụ ohere maka azụmaahịa nkeonwe nke dị njikere inye aka n’ichekwa ebe ihe dị iche iche dị ike dị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ịmalite azụmahịa nke ha na UAE, ngalaba nke mmezi ụlọ ọrụ ike nwere ike ịbụ otu nhọrọ ị ga - achọ ịtụle. ma oburu na inwere ihe aka ma obu ihe omuma.
10. Ịzụ ahịa
Dubai bụ ebe nleta maka azụmaahịa gafee ọtụtụ ngalaba iji zute na ahia ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ahịrịokwu a na-akpọmbupụ na mbubata“Ka ị ga-eme ugboro ugboro anụ na onodu nke Dubai. Enwere otutu ohere na mbupụ ma obu mbubata nke ọtụtụ ngwaahịa; ọmụmaatụ, ihe eji ejiji, mkpụrụ osisi akpọnwụ, akwa, akwa, ngwongwo plastik, ugbo ala na otutu ndi ozo.
11. Business Franchises
Mgbasa ozi azụmaahịa bụ ihe ọhụrụ mana echiche na-eto eto na UAE. N'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị bi na ya, yana ụdị mmasị ndị mmadụ bi ebe a, echiche banyere ịsụgharị ahịa azụ ahịa agaala nke ọma n'ime afọ ole na ole gara aga. Industrylọ ọrụ nri ngwa ngwa bụ otu Ngalaba Dubai na-eto ngwa ngwa, na-emepe emepe emepe ma na-enwewanye azụmaahịa azụmahịa.
12. Ụlọ ọrụ Job
Mgbe ọ na-abịa Dubai, ọzọ ohere ịtụnanya dị egwu metụtara ụlọ ọrụ nke emepụtara kpọmkwem maka ndị ọrụ aka ọrụ. Site na uto akụ na ụba mba na-eme ngwa ngwa, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ọrụ na ndị ọrụ chọrọ ihe ime ka ụlọ ọrụ UAE dị iche iche na-arụ ọrụ. Na mgbakwunye, enwere mkpa nkụpu maka ndị ọkachamara IT, ndị na-eme ndekọ ego, ndị nọọsụ, ndị injin, yana ndị ọrụ ihe owuwu, n'etiti ndị ọzọ, na mba a.
13. Klọb abalị, Ogwe, na Ntụrụndụ
Dubai bụ otu n'ime ndị ahụ obodo ebe ndị mmadụ na-ejikarị ọrụ n'aka. Mgbe mgbịrịgba ahụ na-aka akara ka njedebe nke ụbọchị ọrụ ha, ndị mmadụ nọ ebe a chọrọ ka ha hapụtụ ikuku. Ha na-apụ apụ aụọ ihe ọ orụ orụ ma ọ bụ abụọ ma soro ndị enyi na ndị ọrụ ibe nọrọ oge ụfọdụ iji kpochapụ nrụgide na-eme ka ike gwụ ha kwa ụbọchị. Maka onye obula n’eche na-esetịpụ azụmaahịa dị na mba dị mma bụ ịtọ ụlọ oriri na nkwari abalị ma ọ bụ azụmahịa ntụrụndụ maka ndị na-ewe ha. Etinye ego na klọb n'abalị, ụlọ mmanya ma ọ bụ ntụrụndụ azụmahịa bụ ezigbo ụzọ maka ibido.
14. Njem Agency
Onebụ otu n’ime ebe ndị njem ezumike ụwa dị, enwere nnukwu ohere maka ụlọ ọrụ njem na UAE. Ọtụtụ nde ndị njem na ndị nleta na-eme atụmatụ ịga na site na Dubai kwa afọ. Ọzọkwa, ndị niile bi n'obodo a ejiri ndị ọbịa si mba dị iche iche juputara, ha niile nwere mkpa njem. Nke a na-eme azụmahịa njem gị n'ụlọnga na UAE itinye uchu bara uru ịtụle.
Tingmalite azụmahịa na Dubai bụ ihe kwụ ọtọ, agbanyeghị na-akwadoro ma na-eji ụfọdụ ihe ọmụma mara onwe gị ga - enyere aka mee ka usoro a dị mma dịka o kwere mee, ma setịpụ gị maka nke ahụ, n'okpuru anyị nwere ụfọdụ ihe dị mkpa gbasara Dubai ị kwesịrị ịmara tupu ịmalite azụmaahịa gị ebe ahụ. Ya mere, ka anyị banye na ha:
Ihe dị mkpa ịmara tupu ịmalite azụmahịa na Dubai
Manymalite ịmalite azụmahịa gị na Dubai na ọtụtụ na-ahụta na ọ bụ ihe na-akwụghachi ụgwọ yana nke na-enye ezigbo ego. Ma ọ nwere ike ịdịkwa ka ihe dị ize ndụ mgbe ị na-etinye ndị ọbịa nke mba ọzọ. Ọzọkwa, itinye ego na a ụlọ ọrụ dị na Dubai dị ka onye mbịarambịa nke si mba ọzọ ịchọrọ isoro onye amaala UAE na-akpakọrịta tupu enyere gị ikike ịmalite ụlọ ọrụ.
Nwa amaala (onye gị na ya na-emekọ ihe) kwesịrị inwe oke nke azụmahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmalite azụmahịa nke gị na Dubai, gbaa mbọ hụ na akwụkwọ ndị ahụ ji ma ọ bụ na ị ga - atụfu ego gị.
Enwere ihe enweghị ebe ọ bụla na Dubai maka azụmaahịa ndo. Nke ozo, iso uzo kwesiri ekwesi g’eme ka nloghachi ya na uru karie mgbe i guzobere azụmahịa nke gi. N'okpuru bụ ụfọdụ usoro ị ga - eme ma ọ bụrụ na ichoro ibido azụmahịa nke gi na Dubai.
1. Omume Omume nke Omume
Obi abụọ adịghị ya na gburugburu ebe obibi azụmahịa na Dubai ghere oghe nye ndị obodo dị iche iche, mana ọ dị mkpa ịgbaso usoro ụfọdụ tupu ịmalite azụmahịa. Otu n'ime ndị a bụ ndị na-eduzi ọmụmụ ihe nke ọma. Nke a na - enyere aka have nwere ezigbo ihe omuma banyere Dubai. Ọnọdụ ahịa ahụ, ndị na-ege ntị na-eleba anya, ụkpụrụ, lọjistik na ihe ndị ọzọ. Kpamkpam ga-enwe mmetụta na ọganiihu azụmahịa gị. You nwere ike ikpebi ozi a site na nyocha nke ahịa, ịgakwuru ndị ọkachamara na ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ site na nyocha asọmpi. Yingmuta ndị asọmpi gị, ọkachasị, nwere ike ị nweta ozi bara uru: ị ga-ahụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma na nke anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ya mere imuta ihe banyere ihe ha n’aru dika odi nma ya.
2. Lezie anya maka Onye Mmekọ Ego
Tupu ịmalite azụmahịa dị ka onye mbịarambịa si mba ofesi na Dubai, n’iwu ị ga-achọ onye mmekọ obodo. Ha nwere ike bụrụ nwa amaala nke UAE, ma ọ bụ ụlọ ọrụ mpaghara. Ọzọkwa, dị ka iwu si kwuo, onye ọrụ azụmahịa mpaghara kwesịrị inwe oke nke ụlọ ọrụ. E nwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi jikwaa ọnọdụ a: onye gị na ya na - azụ ahịa nwere ike ịbụ onye na - azụkwa azụmaahịa ahụ. Inweta òkè na Mkpebi ma soro gị rụọ ọrụ niile. N’aka ozo, inwere ike choo “onye gi na ya huru ura”, onye na etinye ego ya ma obu ike ya n’aha, ma buru onye aka gi ebe obu na i n’eme ihe banyere otu ubochi a. Nke ikpeazụ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ala ọzọ na-etinye ego na azụmahịa na UAE.
3. Nhọrọ Nhọrọ Nke Na - achọ Onye Mmekọrịta Onye Obodo
Ọ bụrụ n’inweghị ike ịchọta onye ibe gị na obodo ị tụkwasịrị obi, ọ ga-enwekwa obi ụtọ ịbanye na azụmahịa. A ka nwere ike inwe nhọrọ ị nwere. Agbanyeghị na n'ọtụtụ oge, gọọmentị Dubai chọrọ ndị na-etinye ego si mba ọzọ ka ya na onye otu ime obodo rụ ọrụ na Dubai. Ha ewebatala iwu na-eme ka ndị si mba ọzọ bata nwere 100% nke ufodu ahia. Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ịtọ ahịa gị n'otu mpaghara zụrụ ahịa azụmaahịa obodo ebe iwu anaghị etinye ya. N'ọnọdụ nke ọ bụla, a ga-adụ ọdụ ka ị chọọ ndụmọdụ nke onye ọka iwu mpaghara ịhụ kedu nhọrọ ị nwere ike inweta.
4. Mee ka ego dị mkpa (mmalite ego)
Achọrọ ego maka mmalite mgbe ị na-eguzobe ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla. Mgbe ị na-amalite azụmahịa na Dubai, a na-achọkwa ihe ụfọdụ akọwapụtara na nke a. Tupu ikike inye gị ohere itinye ego na ịmalite azụmahịa nke gị na Dubai. A ga-agwa gị ka ị gosi gọọmentị mpaghara na ị nwere ego ole achọrọ. Mgbakwunye ego achọrọ na-adịkarị n'etiti $ 10,000 na $ 50,000. Nke a nwere ike ịdị iche ma ọ bụrụ A na - arụ ọrụ n'ime otu mpaghara Dubai n'efu.
5. Ndebanye aha nke azụmahịa gị
Tupu ị gakwuru Ministrị Azụmaahịa. Kwesiri ime ihe ụfọdụ ịchọrọ iji mezue usoro idebanye aha azụmahịa gị. Ọ bụrụ n’anyị ejighị n’aka ihe ị ga-eme. Shouldkwesịrị ịkpọtụrụ onye ọka iwu na Dubai nke ọkachamara na hna-elebanye anya na ndị mba ọzọ na - etinye ego iji debanye aha ha n'akwụkwọ.
Na njedebe, ibido azụmahịa nke gị na Dubai nwere ike ịghọ ezigbo achụmnta ego na-aga nke ọma, ma ọ bụrụ na ị na-eso echiche na ndụmọdụ ndị a kpọtụrụ aha ebe a. Ọzọkwa, debe onwe gị oge niile site na imeziwanye ahịa azụmaahịa gị.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.